DFS oo ka hadashay wararka sheegaya inay Shabaab siidaayeen Dhaqaatiirtii u afduubnaa | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	DFS oo ka hadashay wararka sheegaya inay Shabaab siidaayeen Dhaqaatiirtii u afduubnaa
Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Soomaaliya ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay warar sheegaya in Al-Shabaab ay sii deysay dhakhaatiir u dhashay waddanka Cuba, oo muddo u afduubnaa.
Axmed Ciise Cawad, oo la hadlay BBC-da ayaa xaqiijiyay in dowladda federaalku ay waddo dadaallo dadka afduuban lagu sii deynayo, laakiin ilaa hadda aysan xukuumadda uu ka tirsan yahay waxba ka ogeyn sii deynta dhakhaatiirta reer Cuba.
“Mas’uuliyiinta Soomaaliya ma sheegin warkaas, mana aha war dowladda Soomaaliya ka baxay. Nimankaas waxaa afduubay Al-Shabaab, haddii lasii daayayna Al-Shabaab baa og. Annagu dadaallo ayaan wadnay, oo aannu ku daneyno qofkii ajnabi ah oo ay Soomaaliya wax ku gaaraan, marka dadaalladaasi way socdaan, dowladda Cuba-na waan kala xiriirnaa, laakiin warkaas meelaha la marinayo ma aha war dowladda Soomaaliya ay sii deysay,” ayuu yiri wasiirka.
Qaar ka mid ah warbaahinta caalamiga ah ayaa shaaciyay warka ku saabsan Al-Shabaab ay sii deysay labo dhaqtar oo u dhashay dalka Cuba kuwaas oo ay sanadkii hore ka afduubteen magaalada Mandera, gobolka Waqooyi-bari Kenya.
DFS oo ka hadashay wararka sheegaya inay Shabaab siidaayeen Dhaqaatiirtii u afduubnaa was last modified: October 8th, 2020 by Admin
Sanbaloolshe: Farmaajo mudada uu dastuurka ogolyahay kuma soo magacaabin Raaisal wasaaraha
USA: Trump “…Hadii aan xiri karo Shirkada Twitter waan Xirayaa!…”
Video Wasaaradda isgaarsiinta KGS oo Eedeysay Wasaaradda isgaadhsiinta Soomaaliya